एमसीसी पारित गराउन लागेका मन्त्रीहरू उखुका छोक्राजस्तै फालिनेछन् - Online Majdoor
एमसीसी पारित गराउन लागेका मन्त्रीहरू उखुका छोक्राजस्तै फालिनेछन्
२५ बैशाख २०७७, बिहीबार ११:४१
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँसँग समसामयिक अवस्थाबारे लिइएको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत छ–सम्पादक
अध्यक्षज्यू, कोभिड–१९ महामारी प्रतिरोधको लागि लकडाउनको अवधि लम्ब्याउने विषयमा सरकार नै अन्योलमा देखियो। मङ्गलबार गृहमन्त्री लकडाउन अब नलम्बिने भन्दै थिए । बुधबार सरकारले लकडाउन जेठ ५ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । यो विषयलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?
खुला सिमाना भएकोले नेपालमा लकडाउन फुकुवा हुनेबित्तिकै भारतबाट ओइरिने मानिस सरकारले रोक्न र थेग्न सक्नेछैन । भारतमा कोभिड–१९ को महामारी व्यापक बन्दै गएको अवस्थामा नेपालमा लकडाउन खुल्ने अवस्थामा यता आउने सङ्ख्या बढ्नेछ । त्यसले नेपालमा समेत महामारी फैलिने सम्भावना बढाउनेछ । त्यसकारण लकडाउनको अवधि लम्ब्याइनु आवश्यक छ । बरु, नेपाल फर्किन चाहने नेपालीहरूलाई नेपालतिर उचित क्वारेन्टिन कक्ष बनाई राख्ने बन्दोबस्त सरकारले गर्नुपर्छ ।
अहिले लकडाउन फुकुवा गर्दा झापामा भारतीयहरू हातहतियारसहित नेपाली भूमि पसेको जस्ता घटना अन्यत्र पनि हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसप्रति सरकार सजग हुन जरुरी छ ।
लकडाउन लम्बिए देशको आर्थिक सङ्कट चुलिने केही पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले बोलेका छन्। तपाईँको धारणा के छ ?
सन् २०१७–१८ को तथ्याङ्क अनुसार देशमा ३७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामात्र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन्, बाँकी ६३ प्रतिशत मानिस सहरी क्षेत्रमा बस्छन् । त्यस्तै देशको कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत मानिस कृषिमा आधारित छन् । २० प्रतिशत कृषिमा आधारित जनसङ्ख्याले अर्थतन्त्रमा अधिकतम योगदान गरे २० प्रतिशत होला । बाँकी त अन्य क्षेत्रबाट नै योगदान भइरहेको देखिन्छ । त्यसमा ठूलो हिस्सा विभिन्न देशमा रहेका नेपाली कामदारहरूबाट आउने रेमिटेन्सको हिस्सा छ । कोभिड–१९ महामारीको कारण अब रेमिटेन्समा कमी आउने देखिएको छ ।
हामीले धेरैअघि बाटै रेमिटेन्सको भरमा मात्र देश चलाउन खोज्दा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा कुनै नचिताएको समस्या आए नेपाली जनताले दुःख भोग्नुपर्ने बताउँदै आएका छौँ । देशलाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याउनुपर्छ, त्यसको निम्ति कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ, हाम्रो देशमा बन्दरगाह छैन । भएका उद्योग कलकारखाना पनि ठप्प छन् । तर, ७० लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरू विदेशमा छन् । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति छैन । त्यसकारण देशको परनिर्भरता चुलिएको छ ।
शासक दलहरूले पर्यटन उद्योगलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाउने भन्दै आएका छन् । तर, पर्यटन स्वयम् पनि भरपर्न सकिने उद्योग होइन । कदाचित भारत–पाकिस्तान लडाइँ, पूर्वी वा दक्षिण एसियामा कुनै समस्या अथवा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट आए पर्यटन उद्योग बन्द हुने अवस्था आउँछ । त्यसकारण कृषि आत्मनिर्भरतामै सरकारले जोड दिनुपर्ने हो ।
आजको अवस्थाको निम्ति हिजोका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य नीति निर्माणका निम्ति पदमा बसेका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार ठहर्‍याइनुपर्छ । हिजो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट २–२ सय जना नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीति ल्याउने मन्त्रीहरूले आजको जस्तो परिस्थितिसमेतको आकलन गरेर त्यत्तिबेला पक्कै केही विचार पुर्‍याएको हुनुपर्छ । त्यसकारण, सरकारले तिनै मन्त्रीहरूलाई देशले अहिले भोगिरहेको आर्थिक सङ्कटको समाधान के हुनसक्छ भनी सल्लाह लिनु वेश होला ! प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्नु भनेको कुर्सीमा बस्नु र गाडी चढ्नुमात्र होइन ।
विदेशमा पठाउन युवाहरूबाट लाखौँ लाख कमिसन खाएर करोडौँ करोडको सम्पत्ति कुम्ल्याउने म्यानपावर कम्पनीहरूलाई पनि अहिले जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।
सत्तारुढ दलले अमेरिकी सहस्राब्दी सहकार्य परियोजना–(एमसीसी)बारे निक्र्योल गर्न बनाएको अध्ययन समितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले एमसीसीको विरोध गर्न नहुने फरक मत राख्दै “यस्तो व्यवहारले दातृ समुदायसमक्ष हाम्रो मुलुकको नीति, छवि र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिह्नखडा गर्नसक्ने” भनी अभिव्यक्ति दिए। के एमसीसी पारित नगर्दा दातृ समुदायको विश्वास गुम्ने नै हो त ?
अमेरिकी सहस्राब्दी सहकार्य परियोजना (एमसीसी) प्रष्टतः संरा अमेरिकी सैनिक गठबन्धनको हिस्सा हो । नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार नै तटस्थता र असंलग्नता हुन् । त्यसकारण, एमसीसी पारित गरेर अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा सहभागी बन्नुलाई दातृ समुदायले हाम्रो पक्षधरताको अर्थमा बुझ्नेछन् । त्यसैले एमसीसी पारित भए दातृ समुदायले नेपालको परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न उठाउनेछन् । परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइ सही होइन । यसको हामी निन्दा र खण्डन गर्छौँ ।
एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षका मन्त्रीहरूको अवस्था सिक्किमका लेन्डुप दोर्जेको जस्तो हुनेछ । दोर्जेलाई पनि सिक्किम भारतमा विलय नगर्दासम्म इन्दिरा गान्धीको सरकारले ‘ज्वाईलाई जस्तै सम्मान’ गरेको थियो । पछि दार्जिलिङको कालिङपोङमा उनको निधन हुँदा मलामी जाने कोही थिएन । अहिले एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली नेताहरूलाई पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि साम्राज्यवादीहरूले उखुको छोक्रा मिल्काएजस्तै मिल्काउनेछन् ।
नेपाली किसानहरूका कृषि उत्पादन खेतमा कुहिरहेको छ। बजारसम्म ल्याउन सकेका छैनन् । भारतबाट भित्रिने तरकारीको परिमाण बढेको छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले के गर्नुपर्छ होला ?
हरेक जिल्लामा नेपाल सरकारको कृषिसम्बन्धी कार्यालय छन् । ती कार्यालयले किसानहरूसँग कृषि उत्पादन खरिद गरेर बजारसम्म पुर्‍याउने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । तर, सरकारले गरिरहेको छैन । भारतबाट तरकारी आयातमा मात्र जोड दिइएको छ । यसले त हाम्रो खर्चमात्र बढाएको छ । हाम्रो कृषि नीति हाम्रै देशका मन्त्री र कर्मचारीले बनाउँछन् कि विदेशीले, सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ ।